Xuutiyiinta oo sheegtay in ay dileen madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Warbaahinta ku hadasha Afka Kooxaha Xuutiyiinta ayaa lagu sheegay in ay xoogaggooda dileen madaxweynihii dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax.
Ma jirto cid madaxbanaan oo xaqiijineysa warka ku saabsan dilka Cali Cabdalle Saalax, hasse ahaatee taageerayaashiisa ayaa sheegay in wali uu nool yahay Mr. Saalax, islamarkaana uu hogaaminayo dagaalka.
Warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in sidoo kale la dilay madaxii Amniga madaxweynaha oo lagu magacaabo Hussein Al-Hamidi.
Warkan ayaa soo ifbaxay kaddib markii weerar culus lagu qaaday gurigiisa oo la sheegay in gabi ahaanba la qarxiyay,laakiin waxaa la sheegay in madaxweynuhu xiligaa ka maqnaa guriga
Xaalada ayaa wali ah mid cakiran oo waxaa soconaya dagaal xooggan oo ay bar bar socdaan duqeymo lagu garaacayo magaalada Sanca.
Wixii warar ah ee ka soo kordha waan idin soo gudbin doonnaa.
Ragii Shabaab U Fulinjiray Qaraxyada Muqdisho oo Saaka Xukun lagu Fuliyay iyo Qaar Ka Mid ah